Ch 6 John – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Jaona / Ch 6 John
6:1 Rehefa afaka izany,, Jesosy Nandeha niampita ny Ranomasin'i Galilia, dia ny Ranomasin'i Tiberiasy izany.
6:2 Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy, fa ny nahitany ny famantarana izay efa manatanteraka amin'ny ireo izay marary.
6:3 Noho izany, Jesosy nandeha teo-tendrombohitra, ka dia nipetraka tao mbamin'ny mpianany.
6:4 Ary ny Paska, ny andro firavoravoana andro Jiosy, akaiky.
6:5 Ary noho izany, Jesosy, nony nanopy ny masony ka nahita fa nisy vahoaka betsaka indrindra nanatona Azy, dia hoy izy tamin'i Filipo, "Avy aiza isika no tokony hividianantsika mofo, ka dia izany no ho fihinanareo?"
6:6 Fa hoy izany mba hizahany toetra azy. Fa izy nahalala ihany izay efa hataony.
6:7 Filipo namaly Azy, "Denaria roa-jato ny mofo tsy ho ampy ho an'ny tsirairay amin'izy ireo mba handray na dia kely."
6:8 Ny mpianany anankiray,, Andrew, ny rahalahin'i Simona Petera,, hoy izy taminy::
6:9 "Misy zazalahy anankiray eto, izay manana mofo vary hordea dimy sy hazandrano roa. Fa ho ampy inona moa izany amin'izao olona betsaka?"
6:10 Dia hoy i Jesosy, "Asaivo mipetraka ny olona hihinana." Ankehitriny, nisy ahitra be io toerana io. Ary toy izany koa ny lehilahy, no isan'ny tokony ho dimy arivo, nipetraka hihinana.
6:11 Noho izany, Jesosy nandray ny mofo, ka nony efa nisaotra, dia nizara izany tamin'izay nipetraka hihinana; toy izany ihany koa, avy amin'ny trondro, araka izay tiany.
6:12 Avy eo, rehefa voky ny, hoy izy tamin'ny mpianany, "Angony ny sombintsombiny izay sisa tsy lany, fandrao ho very. "
6:13 Koa araka izany ny nanangona, ka nahafeno harona roa ambin'ny folo ny sombintsombin'ny mofo vary hordea dimy, izay sisa avy any ireo izay nihinana.
6:14 Noho izany, ireo olona ireo, rehefa nahita fa Jesosy efa vita famantarana, hoy izy ireo, "Marina tokoa fa, ity iray ity dia ny Mpaminany izay ho tonga amin'izao tontolo izao. "
6:15 Ary noho izany, rehefa tonga saina fa nony ho avy ny olona haka Azy ka hanao azy ho mpanjaka, I Jesosy indray nandositra any an-tendrombohitra, irery.
6:16 Avy eo, rehefa hariva tonga, nidina ny mpianany ka nankany amin'ny ranomasina.
6:17 Ary rehefa niakatra an-tsambokely, izy ireo dia nita ny ranomasina nankany Kapernaomy. Ary dia izao tonga maizina, nefa Jesosy tsy mbola niverina tany azy ireo.
6:18 Ary ny ranomasina dia namporisika ny rivotra mahery izay nitsoka.
6:19 Ary noho izany, rehefa nivoy tokony ho dimy amby roa-polo na telo-polo stadio, dia nahita an'i Jesoa nandeha teny ambony ranomasina, ka nanakaiky ny sambokely, dia natahotra.
6:20 Fa hoy Izy taminy:: "Izaho. Aza matahotra."
6:21 Noho izany, izy ireo vonona handray Azy ho eo an-tsambokely. Fa niaraka tamin'izay ny sambokely dia tonga tamin'ny tany izay nalehany.
6:22 Ny andro manaraka, ny vahoaka izay nitsangana teo manerana ny ranomasina dia nahita fa tsy nisy sambokely hafa kely eo amin'io toerana io, afa-tsy iray ihany, ary Jesosy tsy mba niondrana an-tsambokely Jesosy sy ny mpianany, fa ny mpianany efa lasa irery.
6:23 Na izany aza tena, sambokely hafa avy tany Tiberiasy tonga ny, akaikin'ny toerana dia tamin'ny nihinanany ny mofo, rehefa nisaotra ny Tompo,.
6:24 Noho izany, rehefa nahita ny vahoaka fa efa tsy teo Jesosy, na ny mpianany, dia niakatra ho any an-kely sambokely, ary izy ireo nankany Kapernaomy, hitady an'i Jesosy.
6:25 Ary rehefa nahita azy manerana ny ranomasina, hoy ireo taminy:, "Rabbi, oviana no tonga teto Hianao?"
6:26 Jesosy namaly azy ka nanao hoe:: "Amen, amena, Lazaiko aminareo, Mitady Ahy ianao, tsy noho ianao efa nahita famantarana, fa noho ianao avy nihinana ny mofo ka voky.
6:27 Aza miasa hahazo ny hanina izay mety simba, fa izay maharitra ho fiainana mandrakizay, izay ny Zanak'olona dia omeko anareo. Fa Andriamanitra efa voaisy tombo-kase ny Ray izy. "
6:28 Noho izany, hoy ireo taminy:, "Inona no tokony hataontsika, mba hahafahantsika miasa ao amin 'ny asan'Andriamanitra?"
6:29 Jesosy namaly ka nanao taminy, "Izao no asan'Andriamanitra, dia ny hinoanareo Izay nirahiny Azy. "
6:30 Ary toy izany koa hoy izy ireo taminy: "Dia inona no famantarana no hataonao, ka mba ho hitanay ka mino anao? Inona no miasa?
6:31 Ny razantsika nihinana ny mana tany an-efitra, araka ny efa voasoratra, 'Ary nomeny azy mofo avy any an-danitra hanina izy.' "
6:32 Noho izany, Hoy Jesosy taminy:: "Amen, amena, Lazaiko aminareo, Tsy Mosesy no nanome anareo ny mofo avy any an-danitra, fa ny Raiko no manome anareo ny tena mofo avy any an-danitra.
6:33 Fa ny mofon'Andriamanitra dia Ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. "
6:34 Ary toy izany koa hoy izy ireo taminy, "Tompo ô, omeo anay mandrakariva izany mofo izany. "
6:35 Dia hoy i Jesoa taminy: "Izaho no mofon'ny fiainana. Na iza na iza manatona Ahy tsy mba ho noana, ary izay mino Ahy dia tsy hangetaheta mandrakizay.
6:36 Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe, that even though you have seen me, you do not believe.
6:37 Izay rehetra omen'ny Raiko Ahy no hanatona Ahy. Ary na iza na iza manatona ahy, Dia tsy holaviko avy.
6:38 Fa nidina avy tany an-danitra, Aho mba hanao ny sitrapoko, fa ny sitrapon'izay naniraka Ahy.
6:39 Nefa izao no sitrapon 'ny Ray Izay naniraka Ahy: ny hamoizako na inona na inona izay rehetra nomeny ahy, fa mba hahatonga azy ireo amin'ny andro farany.
6:40 Koa dia, izao no sitrapon'ny Raiko izay naniraka Ahy: ny hahazoan'izay rehetra mijery ny Zanaka ka mino Azy mba ho velona aina mandrakizay, ary Izaho hanangana azy amin'ny andro farany. "
6:41 Noho izany, ny Jiosy nimonomonona momba azy, satria efa nanao hoe:: "Izaho no mofo velona, Ilay nidina avy tany an-danitra. "
6:42 Ary hoy izy ireo:: "Tsy io ve i Jesosy, ny zanak'i Josefa, izay ny rainy aman-dreniny fantatsika? Ary ahoana moa no ahafahany milaza: 'Fa nidina avy tany an-danitra?'"
6:43 Ary dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe: "Aza misafidy ny mimonomonona ianareo.
6:44 Tsy misy olona mahay manatona Ahy, raha tsy taomin'ny Ray, izay naniraka Ahy, Efa mby azy. Ary Izaho hanangana azy amin'ny andro farany.
6:45 Efa voasoratra ao amin'ny Mpaminany: 'Ary izy rehetra dia hampianarin'i Jehovah.' Ary izay rehetra efa nihaino sy nianatra tamin'ny Ray no manatona Ahy.
6:46 Nefa tsy nisy nahita ny Ray, afa-tsy Izay avy amin'Andriamanitra; Izy no nahita ny Ray.
6:47 Amen, amena, Lazaiko aminareo, na iza na iza mino no manana fiainana mandrakizay.
6:48 Izaho no mofon'ny fiainana.
6:49 Ny razanareo nihinana ny mana tany an-efitra, dia maty.
6:50 Ity no mofo izay midina avy any an-danitra, koa raha misy olona hihinana avy aminy, mba tsy ho faty.
6:51 Izaho no mofo velona, Ilay nidina avy tany an-danitra.
6:52 Raha misy mihinana ity mofo avy, dia ho velona any amin'ny mandrakizay. Ary ny mofo izay homeko dia ny nofoko, ho fiainan'izao tontolo izao. "
6:53 Noho izany, ny Jiosy niady hevitra nifampilaza, nanao hoe:, "Hataon'ilehio ahoana re no fanome ny nofony hohanintsika?"
6:54 Ary noho izany, Hoy Jesosy taminy:: "Amen, amena, Lazaiko aminareo, Raha tsy mihinana ny nofon'ny Zanak'olona sy misotro ny ràny, dia tsy manana fiainana ao aminareo.
6:55 Na iza na iza mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana ny fiainana mandrakizay, ary Izaho hanangana azy amin'ny andro farany.
6:56 Fa ny nofoko no tena fihinana, ary ny rako no tena fisotro.
6:57 Na iza na iza mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko, ary Izaho kosa ao aminy.
6:58 Tahaka ny nanirahan'ny Ray velona Ahy, ary Izaho koa velona amin'ny Ray, dia tahaka izany koa izay mihinana ahy, dia izy no velona amiko.
6:59 Ity no mofo izay midina avy any an-danitra. Ary tsy tahaka ny mana fa ny razana izay nihinana, fa maty. Na zovy na zovy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. "
6:60 Hoy izy hoe ireo zavatra ireo, raha nampianatra tao amin'ny synagoga tao Kapernaomy.
6:61 Noho izany, maro tamin'ny mpianany, rehefa nandre izany, nanao hoe:: "Sarotra izany teny izany dia,"Ary, "Iza no afaka hihaino izany?"
6:62 Fa Jesosy, satria fantany tao am-pony fa nimonomonona ny mpianany momba izany, hoy izy taminy: "Ve Mahatafintohina anareo?
6:63 Ary ahoana raha ianao no mahita ny Zanak'olona miakatra ho any ho any amin'izay nitoerany taloha?
6:64 Ny fanahy no manome fiainana. Ny nofo tsy mahasoa manolotra na inona na inona ny. Ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana.
6:65 Fa misy ny sasany aminareo izay tsy mino. "Fa fantatr'i Jesosy hatramin'ny voalohany izay tsy mino sy izay hamadika Azy iray.
6:66 Ary dia hoy izy:, "Izany no antony, No nilazako taminareo fa tsy misy olona mahay manatona Ahy, raha tsy nomena azy Raiko. "
6:67 Rehefa afaka izany,, maro tamin'ny mpianany no niverina, ka tsy niara-nandeha taminy intsony.
6:68 Noho izany, Hoy Jesosy tamin'ny roa ambin'ny folo lahy, "Koa ve ianao te-hiala?"
6:69 Ary Simona Petera namaly Azy: "Tompo ô, hankany amin'iza moa izahay? Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay.
6:70 Ary izahay efa mino, ary manaiky fa Hianao no Kristy, ny Zanak 'Andriamanitra. "
6:71 Jesosy namaly azy: “Have I not chosen you twelve? And yet one among you is a devil.”
6:72 Now he was speaking about Judas Iscariot, ny zanak'i Simona. For this one, even though he was one of the twelve, was about to betray him.